Indray andro, hono, tao amin’ny Moov…. | GAZETY_ADALADALA
Indray andro, hono, tao amin’ny Moov….
Posted on 30/12/2009 by gazetyavylavitra
Vaovao hitako tao amin’ny tranonkalan’ny Moov ity, ary somary nahalasa saina ahy ihany ny namaky azy. Asa izay hevitrao fa, amiko, dia efa nahitàna olana ny fidiran’ny mpitondra fivavahana amin’ny pataloha tery toy itony, nefa dia mbola mitranga indray izy izao. Sady izay indray anaty fotoana fitoriana no anaovana fanambarana politika. Sao dia diso kianja e! Raha nanao fampiantsoana mpanao gazety mantsy ry zareo dia mety ho azoazo ihany ny nieritreritra azy ho toy ny olom-pirenena rehetra afaka maneho hevitra. Fa ilay izy natao teo anoloan’ny mpino tonga nanatrika ny fotoana no mahasadaikatra.
Vakio anie ny fomba nitaterana azy tao amin’ny Moov e!
Raharaham-pirenena: Mpitondra fivavahana nampiaka-peo sy handray andraikitra raha toa…
(29-12-2009) – Miha miakatra ny maripana politika. Efa hatramin’ny mpitondra fivavahana avy no mihetsika ary nanambara fa: “lava reny ny krizy izay hita ho iniana ampitarazohana”.
Mpitondra fivavahana avy amin’ny fiangonana maro no nitsangana sy nampiaka-peo manoloana ny toe-draharaha politika ankehitriny. “Hetsiky ny mpitondra fivavahana” no nataon’izy ireo omaly teny Antsahamanitra ary avy hatrany dia fitakiana sy famakiana bantsilana ny zava-misy eto amin’ny firenena no nataon’izy ireo. “Mijaly ny vahoaka. Asa maro no efa votsotra ka olona maro no tsy an’asa sy ho very asa. Iainana ny tahotra sy tebiteby nefa misy ireo hita fa mitombo harena vetivety. Manjaka ny tsy fahamarinana, ny fampihorohoroana ny vahoaka, ny fisamborana olona tsy mitovy hevitra, ny fampidirana am-ponja”, hoy ny fanambarana. Dia hentitra ry zareo nilaza fa: “raha mbola ikirizana tohizana ny fomba ratsy ary iniana tsy karohina ny vahaolana dia vonona handray andraikitra ary hijoro hatramin’ny farany ny mpitondra fivavahana. Ny fitondrana miorina amin’ny herisetra dia miafara amin’ny herisetra”, hoy izy ireo.
Mbola miantso ireo mpanao politika mba hiverina hidinika anefa ireto mpitondra fivavahana ireto fa: “tsy hitondra ny vahoaka any amin’ny lojikan’ny ady an-trano ary ny fifampidinihana no lalana hivoahana amin’ny krizy”.
Takian’izy ireo tsy misy fepetra koa ny hamelana ny Radio Fahazavana handefa vaovao sy ny hamerenana ny “Ampenjiky”. Takiany koa ny hampiasana ny TVM sy RNM ho an’ny rehetra sy handefa vaovao tsy mitanila.
Tehaka mirefodrefotra no nandraisan’ireo kristianina tonga teny izany rehetra izany. Tsy nisy nahalala kosa anefa fa hisy fanambarana pôlitika tahaka ireny tamin’io fotoam-pivavahana io.
Filed under: anao ny fitenenana, fiaraha-monina, finoana, politika, tapatapany | Tagged: Ampenjiky, Antsahamanitra, Moov, mpitondra fivavahana, pastera, Radio Fahazavana, RNM, TVM |
« Lapan’ny tanàna vaovao (tafo) ARAHABA NAHATRATRA NY TAONA 2010 »